Fan Group Chat Room ထဲမှ Kick Out လုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ Idol များ
On March 29, 2018 March 29, 2018 By shwe yi
Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BTOB ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် Changsub က သူတို့ရဲ့ Fan တွေကို Surprise လုပ်တဲ့အနေနဲ့ Fan Group Chat Room ထဲဝင်ပြီးတော့ သွားစကားပြောမယ်ဆိုပြီး အရင်ဆုံး သူ့ကိုယ်သူစတင်မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ “ကျွန်တော်ကတော့ Lee Changsub ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Chat Room တစ်ခုရှိတယ်ကြားလို့ -” ဆိုပြီး စာရိုက်ရင်း တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာပဲ Group Chat ထဲကနေ Kick Out လုပ်ခံခဲ့ရတာပါတဲ့။ ? ( သနားစရာလေးပါ ! ?)
ဘာလို့ Kick Out လုပ်ခံခဲ့ရတာလည်းလို့ဆိုရင် Changsub Group က သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျည်းကို ချိုးဖောက်မိလို့ပါတဲ့။ အဲဒီ Group Chat ထဲမှာ ဘယ်သူမှစကားပြောလို့မရပါဖူး။ Idol တွေရဲ့ ပုံတွေကိုပဲ အချင်းချင်းမျှဝေလို့ရမှာဖြစ်ပြီး gif နဲ့ text ပို့တာကိုလုံးဝတားမြစ်ထားတာပါတဲ့။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသိတဲ့ Changsub တစ်ယောက် စကားတောင်မဆုံးသေးဖူး Kick Out လုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
အဲ့လို သူ Kick Out လုပ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို သူရဲ့ Instagram မှာ မတ်လ ၄ ရက်နေ့က post တစ်ခုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ Caption အနေနဲ့ရေးထားတာက
” မဟုတ်ရပါဘူး ….
Group Chat ထဲကို Invite ပြန်လုပ်ပေးပါ
သိချင်တာကြောင့်မို့ ဝင်ပြောမိတာပါ “…………….. ဆိုပြီးတော့ ရေးထားပြီး
Group Chat ထဲမှာ သူဝင်ပြောထားတဲ့ Screenshot နဲ့အတူ တင်ထားခဲ့တာပါ။
( မှားသွားရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ Admin ကွီးယားစာမဖတ်တတ်လို့ Google Translate လုပ်ပြီးဖတ်ထားတာကြောင့် အဓိပ္ပာယ်လွဲကောင်းလွဲသွားနိုင်ပါတယ် ၊ မှားသွားခဲ့ရင်လဲ Fan Fan တို့က ပြင်ဖတ်ပေးကြပါလို့ ? )
Idol ကိုတောင် Kick out လုပ်သည်ထိ တယ်လဲ စည်းကမ်းကြီးတဲ့ Fan တွေပါ ?
အဲ့ဒီလို Kick Out လုပ်ခံခဲ့ရဖူးတာ Changsub တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဖူး။ ရှေ့မှာ သာဓကနဲ့ ဖော်ပြလို့ရတဲ့ Idol တွေရှိပါသေးတယ်။
ဘယ်သူတွေလည်းဆိုတော့ Shinee maknae လေး Taemin နဲ့ Key တို့ပါ။ Taemin လည်း Changsub လိုပဲ Fan တွေကို Surprise အနေနဲ့ Group chat ထဲမှာ စကားသွားပြောမိလို့ Group admin က သူ့ကို Kick Out လုပ်တာခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ သူဆိုတာသက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ဘယ် Social Media ပေါ်မှာမှမရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ Selfie ပုံတင်ခဲ့ပေမယ့် Fan တွေကတော့ မယုံခဲ့ကြပါဘူးတဲ့။
သူ့ကို ပြန် Invite လုပ်ပေးပါဆိုပြီးပြောနေပေမယ့် သူ့ကိုဘယ်သူကမှ အဖက်မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးတဲ့ ? ( Poor maknae လေးပါ – invite လုပ်ပေးလိုက်ပါ ကလေးကို ?)
ဒါတင်ပဲလားလို့ဆိုတော့ Block B Park Kyung လည်းပဲ Fan Chat Room ထဲကနေ Kick Out လုပ်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်တဲ့ ။
The Adventure of Ahn Jaehyo in Kakao Open Chats –athread
So he was actually able to join the 고독한 재효 chat & then dropped all the unpublished selfies!!! pic.twitter.com/kMwMm98cIR
— Yezi (@Yezic0) January 25, 2018
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကတော့ Idol တွေခဏခဏ ကြုံတွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဘာလို့ဆို Idol နာမည်တွေ Profile တွေနဲ့ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ update ဖြစ်လွန်းလှတဲ့ ဆင်တူယိုးမှား Account တွေက Social Media ပေါ်မှာ ပလူပျံနေတာဆိုတော့ ဘယ်ဟာကအစစ် ဘယ်ဟာက Fan account ဆိုတာခွဲခြားပြဖို့ တကယ်ခက်တာမို့လို့ Group Admin တွေကိုလည်း အပြစ်တင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။
ကဲ…….. နောက်ထပ်ဘယ် Idol တွေ ဆေးထိုးခံရမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ……. ?
PREVIOUS POST Previous post: ပင်ကိုယ်အလှကို ဖော်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ Christina Aguilera
NEXT POST Next post: Vogue ရဲ့ မေးခွန်း ၇၃ ခုကိုဖြေလိုက်တဲ့ CL